January 2017 – Radio KeyFM
Isiolo oo lagu Aasay Askar ka tirsanaa Ciidamadii KDF ee ku dhintay Weerarkii Kulbiyow
30th January 2017	Somali Language 0
Saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada difaaca Kenya ee lagu dilay weerarkii Kulbiyow ayaa lagu aasay kowntiga Isiolo. Afar askari maydadkooda oo laga qaaday Nairobi ayaa laga dajiyay garoonka caalamiga ah ee Isiolo. Mid kamid ah maydadka ayaa loo gudbiyay kowntiga Marsabit. Maydadka la geeyay Isiolo ayaa salaadii janaasada lagu …
Askari ku dhintay rabshado kasoo cusboonaaday Kerio Valley
Askari ka tirsan ciidamada KPR iyo dad kale ayaa ku dhintay rabshado kasoo cusboonaaday Kerio Valley,una dhaxeeya xoolalay Marakwet kasoo jeeda iyo burcad lagu tuhunsan yahay Pokot. Askariga dhintay ayaa lagu magacaabay David Kipyatich oo ahaa 35 sano jir. Dilka ayaa ka dhacay daaqsinka Chebo-Jetum oo ku yaala bariga Marakwet. …
Dad ka qayb galayay Aaska askari lagu dilay Kulbiyow oo Shil galay
Qaraabada askari ku dhintay weerarkii Kulbiyow ayaa shil ku galay aaga Saleti. Dadka shilka galay ayaa saarnaa gaari dowlada oo noociisu yahay Land Cruiser , sida uu sheegay ku xigeenka gudoomiyaha amaanka Merti Julius Maiyo. Goobta uu shilku ka dhacay ayaa ilaa iyo 10km u jirta magaalada Merti. Aaska Mohammed …
Abaarta : Xoolalayda Garissa Oo U Dhaqaaqay Tana River iyo Lamu
Boqolaal xoolalayda kowntiga Garissa ayaa bilaabay in ay xoolahooda la aadeen goobaha daaqsinka iyo biyaha leh. Xoolalayda ayaa Lo’, Ido iyo Ari la aaday kowntiyada Lamu iyo Tana River oo ay daris yihiin. Qaar kamid ah xoolalayda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ay jirto cabsi ay qabaan,ayna u …
Isbadelka Hanaanka Waxbarashada Kenya Oo Maanta Laga Shirayo
Maanta ayaa la filayaa in lasoo bandhigo hanaanka waxbarasho lagu badeli doono nidaamka 8-4-4 ta ee ka jira dalkani Kenya. Shir weyn oo isugu imaano doonaan aqoonyahano ayaa ka dhacaya dhismaha waaxda horumarinta waxbarashada dalka Kenya. Hanaankan waxbarasho ee 8-4-4 ayaa soo bilowday sanadka markuu ahaa 1985-tii tan iyo xiligaasi …
Boinet Oo Ugu Baaqay laamaha Amaanka Boni la shaqeynta Shacabka Deegaanka
Taliyaha booliska Joseph Boinet ayaa mar uu booqasha ku tagay keynta Boni waxaa uu ka dalbaday laamaha amaanka in ay wanaajiyaan xiriirka ay la leeyihin shacabka si la isaga kaashado ka hor tagida wax yeelada argagixiisada. Sabtidii xili uu kormeerayay xerooyin laamaha amaanka ay ku leeyihin keeynta Boni ayaa taliyuhu …
Kenya oo Ka Hadashay Weerarkii Kulbiyow
27th January 2017	Somali Language 0
Ciidamada difaaca Kenya (KDF) ayaa diiday sheegashada Alshabaab ee ah in ay hareereeyeen saldhiga ciidamada Kenya ee Kulbiyow. Weerarka ayaa dhacay maanta oo Jimca ah saacadu markii ay ahayd 5:00 am. Afhayeenka KDF Lt. Col. Paul Njugua ayaa ku tilmaamay waxba kama jiraan sheegashada alshabaab ee ciidamo badan in ay …
Xildhibaanka Balambala oo kasoo horjeeda Jiifafka in ay qayb ka noqdaan diiwaanka codbixyayaasha
26th January 2017	Somali Language 0
Xildhibaanka Balambala Abdikadir Aden ayaa sheegay in ay jirto sabab ka dambaysa in ay soo faragaliyaan jiifafku diiwaanka codbixyayaasha ee hada socota. Aden ayaa ka jawaab celiyay booqashadii madaxweyne Uhuru Kenyatta ee Garissa,isaga oo sheegay dowladu in ay u adeegsanayso jiifafka iyo ku xigeenadooda si ay codbixiyayaasha u soo ururiyaan …
Boinet oo sheegay Mandera in ay tahay Amaan
Taliyaha booliska Kenya Joseph Boinett ayaa sheegay Mandera in ay tahay amaan,kadib weerarkii Isniintii ka dhacay deegaanka. Askari ka tirsanaa ciidamada KPR ayaa lagu dilay weerarka,iyadoo sidoo kale la qarxiyay qayb kamid ah xafiiska Equity Bank ee Mandera. Boinett ayaa sheegay in aysan jirin magaalo kamid ah caalamka oo gabi …
Maraykanka oo Tababaraya Milatariga Kenya
Cutubyo ka tirsan laanta ilaalada qaran ee Mareykanka aya wada kormeer ay ku wadaan tababar loo sameeynayo xoogaga Kenya ee ku xareeysan xerada ciidamada ee ku taala Thika. Dowlada Mareykanka oo aalaaba wadamada Afrika siisa taageero isugu jirta saanad militiri iyo tababar ciidan aya qorshaheeda yahay sare u qaadista xasiloonida …